Torohevitra 7 momba ny varotra tapakila nomerika mahomby | Martech Zone
Torohevitra 7 momba ny varotra tapakila nomerika mahomby
Alatsinainy Martsa 23, 2015 Douglas Karr
Ny namana tsara Adam Small dia manana sehatra marketing amin'ny finday izay mahita ny taham-panavotana tsy mampino amin'ny tolotra lahatsoratra SMS. Teknika iray notantarainy tamiko momba ny mpanjifa iray izay nanolotra a mitondra namana manolora toerana nahazoanao fihomehezana maimaim-poana rehefa nitondra namana tany amin'ny orinasa ianao. Nandefa ny antsasak'adiny izy ireo alohan'ny sakafo antoandro ary hisy tsipika mivoaka ny varavarana. Hevitra tena tsara izy io satria tsy olona kendrenao fotsiny no kendrenao, fa hahazo mpiaro vaovao afaka manandrana ny sakafonao ianao!
Colorfast, mpanonta printy voalohany any Canada, dia namorona infographic antsoina hoe Ny tapakila nomerika dia ny Sales Sales Mobile sy ny Omni-Channel izay mandeha amin'ny alàlan'ny fampiasana sy statistika mifandraika amin'ny paikadim-barotra marketing coupon nomerika. Manome ireo ny infographic Torohevitra 7 momba ny varotra tapakila nomerika mahomby:
Ampidiro amin'ny mailaka - Alao antoka fa hampidirina amina mailaky ny mpanjifanao ny tapakila nomerika. Ny fahazoana adiresy mailaka dia manome anao fotoana havaozina tsy tapaka momba ny miavaka sy fihenam-bidy koa!
Ampidiro ny Appeal Visual - Ampidiro miaraka amin'ny sary sy sary ny vokatra miaraka amina loko matevina sy marevaka izay hanitikitika ny mpanjifa.
Mpanjifa kendrena - Miaraka amin'ny geo-target, ny orinasa dia afaka manararaotra ny toeran'ny mpanjifa mba handefa tapakila rehefa eo akaiky eo izy ireo!
Mpiara-miasa amin'ny Distributor - Ny serivisy coupon dia manana fotoana fizarana lehibe hanitarana ny tratranao.
Mampiasà hafatra amin'ny hafatra an-tsoratra - Mamorona programa ho an'ny mpanjifa izay mahatonga azy ireo hahatsapa ho toy ny ao amin'ny klioba manokana ary manome tolotra tokana azy ireo.
Amporisiho ny fizarana - Ampidiro ny bokotra media sosialy hahafahana mizara tsindry iray monja amin'ireo sehatra media sosialy.
Fatra refesina - Rehefa tonga amin'ny daty famaranana ny fampiroboroboana tsirairay dia jereo izay mandeha ary inona no tsy nahomby ary nanatsara ny fanentanana nataonao manaraka.
Tags: tapakilamarketing amin'ny coupontapakila nomerikamarketing amin'ny tapakila nomerikatapakila mailakatapakila an-gazetySMStapakila smsfihenam-bidy smsklioba an-tsoratratapakila amin'ny hafatra an-tsoratrafihenam-bidy amin'ny smstolotra hafatra an-tsoratrafandefasana hafatra an-tsoratravalpak